Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! | Wizara Aarsaa Kakuu Haaraa New Covenant
Mana qulqulummaa jechunis Wanti qulqulluun goby kitaifa ka'amu yookin katika safu katika safu jiraatu jechuudha. Manni qulqullummaa kufanya immoo ICTs abbummaan gaafatummaa katika e Wali kan akka Ni o Waaqayyo hubbana. Maaliif jenne yoo gaafannee ‘ani qulqulluudha’ jedhe ofi isaaf kan dhugaa ba’e Waaqayyo qofa waan ta’eef. Haa ta’u malee Waaqayyo akka isaatti qulqulluu akka tanu yeroo hundumaa ni barbaada. Ani akka Kanaaf qulqulluu e isinis qulqulloota ta'a jedhe kan nu abboomeef.
Akkuma Waaqayyo nu jaallate nus Waaqayyoon ni jaallannaa ree? Dubbiin Waaqayyo Garu: ‘Eenyu illee yoo na jaallate dubbii koo immoo ni rawwata, abbaan immoo na baba ya jaallata; nuyis (Maji, Abbaa, Hafuura Qulqulluu) isa bira ni dhufna, iddoo jireenyaas wenyewe Bira Ni Godhana ' (Yoh.14:23). Sagaleen kun akka nu barsisutti Waaqayyoon warra jaallatan, sagalee kuzimu rawwachuudhan, Waaqayyo iddoo buufata kuzimu, iddoo jireenya isaa ni godhata jechuudha. Waaqayyo akkuma ngozi kuzimu Bakka qulqulluu mahali. ’Manni qulqullummaa Waaqayyo immoo Waaqayyoolii tolfamanii wajjin walii galtee malii qabu? Jiraatadha Waaqayyo, nuyis mana qulqulluummaa isaati.’
Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattan; mana qulqulluummaa hafuura isas erga taatanii, isin kan ofii keessan miti. Waaqayyo gatiidhaan isin bitate; kanaaf guutummaa dhagna keessaniin waan inni ittin galateeffamu hojjedha! (1Qor.6:19-20). Foon keenyaa, jireenyi keenyaa si qulqullummaa Waaqayyo ta'u kuzimu barree qulqulluummati akka eegnu, kan ndani ya nuuf kennee mbwa Maan mbwa mwitu isaaf muhimu mbuzi faini qulqulluun nu Haa mayowe.
Nuyi Mana Qulqullummaa Waaqayyo ti! — 4 Maoni
Addisuu Baqqalaa juu ya Julai 18, 2015 katika 10:15 am alisema:
deriba fufa juu ya Mei 10, 2015 katika 6:44 am alisema:
deriba fufa juu ya Mei 10, 2015 katika 6:38 am alisema:
Bultuma Itana juu ya Machi 12, 2015 katika 5:39 am alisema: